Byare January 7, 2019
(Europe) 07 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Barcelona ayay ka go’an tahay inaysan bishan Arsenal ka iibin xiddigeeda qadka dhexe reer Spanish Denis Suarez, 25-jir. (Mirror)
Wolves ayaa dhammeystirtay heshiis ay la gaartay kooxda iska leh Tammy Abraham ee Chelsea si ay amaah ugu qaado inta ka harsan xilli ciyaareedka. 21-jirka reer England ayaa lagu wadaa inuu maanta go’aan ka gaaro inuu soo afjaro iyo inkale heshiiska amaahda uu ku joogo Aston Villa si uu ugu soo dhaqaaqo Molineux. (Express and Star)
Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha kor ka ilaasnahaya daafaca reer Greece ee kooxda Roma Kostas Manolas, 27-jir kaa oo qandaraaskiisa lagu bur-burin karo 32-milyan oo bound. (Sun)
Macalinka Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inaysan suurogal ahayn inuu amaah uga tago 18-jirka reer England ee garabka kaga ciyaara ee Phil Foden. (Independent)
Arsenal lama filayo inay dalab hormarsan ka gudbiso xiddiga Roma ee lagu qiimeeyay 45-milyan oo bound. kaddib markii laga soo diiday dalabkii hore ee 35-milayn oo bound oo ay ka gudbisay 21-jirka reer Turkey ee garabka ka ciyaara. (Star)
Tababaraha Crystal Palace Roy Hodgso ayaa sheegay inuusan weligii maqal weeraryahanka Sunderland ee Josh Maja iyadoo ay jirto in kooxda lagu naaneyso Eagles lala xiriirinayay inay Janaayo u dhaqaaqdo 20-jirka reer England. (Mirror)
Aston Villa ayaa isku diyaarineysa inay u dhaqaaqdo 22-jirka reer France ee weerarka kaga ciyaara Brentford ee Neal Maupay. (Sun)
Abdulkadir Omur, 19-jirka qadka dhexe reer Turkish ee kooxda Trabzonspor, kaa oo lala xiriirinayay Liverpool ayaa sheegay inuu aad ugu farxi doono fursado uu ugu biirayo kooxda Jurgen Klopp. (Liverpool Echo)
Macalinka Newcastle Rafael Benitez weli kama qeyb qaadan wada hadalada heshiis Cusub, iyadoo ay jiraan warar soo jeedinaya in dhawaan loo soo bandhigay qandaraas hal sano ah. (Newcastle Chronicle)
Tababaraha Bournemouth Eddie Howe ayaa seegay in laga yaabo inay bishan sameeyaan saxiixyo dheeri ah iyadoo ay jirto inay dhawaan la soo wareegeen xiddigaha Liverpool ee Dominic Solanke iyo Nathaniel Clyne. (Sky Sports)
W/D: Abdisamed Mohamed Hassan. (Black Yare)
“Dhibaatada haatan heysata Real Madrid sabab uma ahan muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR” - Modrić